Ny milina fanamarihana laser dia be mpampiasa, ary ny famaritana ny vokatra amin'ny lafim-piainana rehetra dia mety ho afa-po amin'ny ankapobeny. Ny masinina fanamarihana laser laser, ny milina fanaovana marika laser dioxide, ny masinina fanamarihana laser ultraviolet, ny fitaovana manokana dia tsy maintsy ampiasaina hahitana ny akora vokatra, fanamarihana ny atiny Sy ny fitakiana vokany. Tsotra ihany ny fampiasana azy, fampiofanana kely io.
Rehefa mihamatanjaka ny fahasarotan'ny fizotran'ny fanoratana, ny famokarana sy ny milina nentim-paharazana dia ferana amin'ny alàlan'ny fitaovana sy ny teknolojia, ary ny marinanan'ny zavatra voahodina dia ambany, izay misy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny vokatra amin'ny lafiny iray, ary misy vokany bebe kokoa aza ny tombony ara-toekarena.
Araka ny haavon'ny angovo avo sy ny fahaizan'ny laser, ny milina haingam-pandeha haingam-pandeha amin'ny rafitra XP dia novolavolaina tamim-pahombiazana tamin'ny taon-dasa famokarana fitaovana laser. Ny fitaovana dia manana fitaovana fanodinana marobe, sisin'ny fanapahana malama, tsy misy burrs, tsy misy polishing, tsy misy tabataba, tsy misy vovoka, hafainganam-pandeha haingana, avo lenta, tsy fako ary mahomby be. Io no safidy tsara indrindra ho an'ny indostria sy ny fanoloana rehetra.
Masinina tamin'ny laser 1313
Azo ampiasaina amin'ny fanodinana tsy metaly. Ampiasaina amin'ny indostrian'ny dokam-barotra, indostrian'ny asa-tanana, kilalao, akanjo, fanamboarana, fonosana, taratasy sns. Fitaovana azo ampiasaina: akrilika, birao MDF, akanjo, hoditra, taratasy, sns.
1) Volavola misaraka: mora apetraka amin'ny varavarana tery (na varavarana 80cm ny sakany).
2) Ny lalàm-pitantanana rehetra dia ampidirina avy any Taiwan (Shangyin sy CSK) ary ny lalamby fitarihana voalohany dia misy slider.
Laser sokitra sy fanapahana milina fametahana laser sy milina fanapahana sisin-dàlana mifandraika mifandraika: Modelin'ny vokatra SY 1610 [Fanohanana maodely manokana namboarina]
Lalam-by fitarihan-dàlana sy haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha hampandeha tsara ny sisin'ny fanapahana; Ampiasao ny famolavolana rafitra miharo hampiorina ny milina tsy misy tabataba; Fandidiana tsotra, filaharana sokitra tsy voafantina, haavo fanodinana, fanitsiana malefaka ny herin'ny laser, haingam-pandeha sy halavany ho an'ny famoahana indray mandeha eo an-toerana na indray mandeha; Misokatra rindrambaiko misokatra, mifanaraka amin'ny Autocad , Coreldraw, sary sokitra goai, Photoshop ary rindrambaiko famolavolana sary hafa; Miaraka amin'ny mpiaro vaky rano, miaro laser tsara kokoa, manitatra ny androm-piainan'ny laser, jiro pedal tongotra tsy voatery atao, ataovy mora sy haingana kokoa ny asanao. Volavola mahafinaritra; Takelaka vy mahery matanjaka, kilasy indostrialy; Antoka amin'ny fomba mahomby ny fizotran'ny fampandehanana sy ny fiainana serivisin'ireo fitaovana; Fandehanana fiarandalamby fitarihana; Fehikibo fehikibo; Azonao atao ny misafidy ny manamboatra toho-tantely / grid / flat / lift;
Teknolojia misy patanty: rafitra fanesorana setroka sy vovoka ary vovoka miavaka miakatra sy midina; Fiarovana mitsoka; Fitaovana fanapahana sokitra.
Laser sokitra sy fanapahana milina fametahana laser sy milina fanapahana sisin-dàlana mifandraika mifandraika: Modelin'ny vokatra SY 3040-6090–1390-1313-1414-1610-1325 [Fanohanana modely manokana namboarina]
Masinina sokitra 6090 CNC
Ny andian-dahatsoratra MK6090 dia misy fiasa mahery miaraka amin'ny fampisehoana tsara, mora ampiasaina, mafy orina ary maharitra. Izy io dia ampiharina betsaka amin'ny dokam-barotra, acrylic, varahina, Wood, Plastika, Aluminium, Di-Bond, Board of Engraving, Fomex. Plastika injeniera, marbra, acrylic, perspex, PVC, panneaux Composite, Copper, Alloys, MDF, sns.
①Manao an'ity tsipika ity isika an-taonany maro, manana traikefa manan-karena sy fahalalana matihanina, dia hamela anao hanana milina mety indrindra miaraka amin'ny fikirana mety. Ity fahaizana ity dia ahafahanao misoroka fahadisoana maro ary misoroka olana sasany. Ny orinasa hafa matetika dia tsy manana an'ity traikefa ity ary miteraka olana amin'ny tena mpanjifa.
②Raha mampiasa ny milina fanapahana plastika hanapaka ny sakafo matevina dia tsy maintsy mampiasa ny rafitra fanitsiana ny haavon'ny arc, raha ny rafitra avo lenta kosa mampiasa ny sensor avo lenta, ny iray minitra dia afaka mandefa signal12, 000 isa-minitra raha ny rafitra fanitsiana haavo hafa dia mazàna mandefa 10000 famantarana isaky ny iray minitra, ny kalitaon'ny fanapahana soour dia tsara kokoa noho ny ozinina hafa ary ny fanapahana hafainganam-pandehan'ny fako dia haingana kokoa noho ny loharanon-karena plasma mitovy.